INintendo inokuqalisa ngokwalo ulawulo lweefowuni eziphathwayo | IPhone iindaba
INintendo iya kuqhubeka nokubheja kwimobile; inokuqalisa ulawulo lwayo
Kubonakala ngathi kudala Nintendo Ndifunde ukuba ikamva lemidlalo eqhelekileyo ikwizixhobo eziphathwayo. Into embi kukuba iyabuzwa, kodwa sele bemisele iMiitomo kwaye bathembisile ukuba bazakuqalisa imidlalo emininzi ye-iOS kunye ne-Android. Ewe kunjalo, hayi ngaphambi kokucacisa ukuba abayi kuzisa izihloko ezinje ngoMario okanye uZelda kwiivenkile ezahlukeneyo zesicelo, mhlawumbi ezo singathanda ukuba nazo kwi-smartphone yethu.
Wayethetha ngento eyenziwayo ukungqiba ngoba, okwangoku, bakhuphe umdlalo omnye kuphela kwaye into elandelayo abathetha ngayo kukwazisa abalawuli bomzimba, Oko kukuthi, abalawuli bomdlalo bayahambelana neefowuni kunye neepilisi. Oku kwavunywa nguShinya Takahashi, umphathi jikelele wezicwangciso kunye nokuzonwabisa kwenkampani yaseJapan, kwintlanganiso yonyaka nabanini zabelo.
INintendo iya kwenza abalawuli kwimidlalo yevidiyo ephathekayo
UTakahashi uthe uNintendo uceba ukutyala imali kulawulo lomzimba lwee-smartphones kunye neepilisi, esazi ukuba zininzi esele zikhona, kuba ukukhupha ezabo kuya kubavumela phuhlisa ngokukodwa abalawuli bakho.
Izilawuli ezibonakalayo zomsebenzi osisixhobo sefowuni sele zikhona kwimarike kwaye kungafuneka siphucule nento nathi. Ndicinga ukuba indlela yeNintendo yokucinga kukujonga ukuba ingaba imidlalo yesenzo ayinakwenzeka na (ngaphandle kwesilawuli somzimba sezixhobo zesixhobo se-smart) ukwenza kunye nendlela esinokuthi senze ngayo ukuba sidale umdlalo.
Kwelinye icala, kwaye oku kubonakala kunomdla kum, umongameli weNintendo, uTatsumi Kimishima uthe inkampani iya kuqhubeka nokutyala isoftware enxulumene nemidlalo ye-iOS. Sele beqinisekisile ngo-Matshi ukuba bazakuqalisa imidlalo emi-5, omnye wabo yiMiitomo ebonakala ngathi itsale abasebenzisi abancinci nabancinci. Eminye eminye imidlalo emihlanu ethenjisiweyo iyaziwa kwakhona: Ukuwela kwezilwanyana kunye nomfuziselo womlilo. Akukho nto yaziwayo ngamanye amabini okwangoku.
Kubonakala ngathi iNintendo iya kubheja kakhulu kwimidlalo yezixhobo eziphathwayo, kodwa ngokwam kubonakala ngathi zithatha ixesha elide kwaye azihambi kwicala elifanelekileyo. Ngabalawuli abanjengoNimbus abakhoyo, ungayikhupha njani eya kuphucula amava okudlala? Okwangoku kuphela kwento endinokucinga ngayo kukuba kude kwakho kubandakanya indawo yokubamba, kodwa zonke ii-smartphones endizaziyo zinescreen sokuchukumisa. Siza kubona ukuba bayothusa na, ngcono okanye ngokubi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » INintendo iya kuqhubeka nokubheja kwimobile; inokuqalisa ulawulo lwayo
Ukukhawulezisa ukuthelekisa phakathi kwe-iOS 9.3.2 kunye ne-iOS 10 beta 2
Uyenza njani into yokuQinisekiswa kweZinto ezimbini kwiakhawunti yakho yeApple